Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguCarola
I-Atlantic Retreat Lodge yindlwana ehlaziywe ngokupheleleyo (egqitywe ngo-2019) enezixhobo zangoku nezitsha zonke zokwakha/izixhobo.
Le ndlu inobunewunewu kwaye inesitayile ibekwe kwindawo ezolileyo ye-du-sac kwi-Galway Bay peninsula nje umgama omalunga ne-9 min ukusuka kwilali ephilayo yaseKinvara. IGalway Bay ikumgama oziimitha ezingama-500 kwaye iTraught Beach edumileyo ikumgama oyi-1 km. Unokonwabela iimbono ezintle zeBurren.
Le ndlu inendlu kumgangatho ongaphezulu kunye nenye kumgangatho ophantsi.
++++ Corona-Virus UHLAZIYO +++++++
Nceda ujonge izithintelo zangoku zeNqanaba le-COVID ye-Irish ngaphambi kokuba ubhukishele eBusika/eNtwasahlobo ngo-2021! Ngaphantsi kwesithintelo seNqanaba lesi-5 kuphela iindwendwe ezihlalela iinjongo ezingezozantlalontle nezingezizo ezokhenketho ezivumelekileyo ukuba zibhukishe (umzekelo, abahambi bezoshishino, abazili, "abagxothiweyo"/ikhaya losapho elineengxaki zobugcisa). Phantsi kweminye imiqobo yeNqanaba uvumelekile ukuba ubhukishe ihotele/ikhaya leholide. Nceda ujonge iNqanaba langoku kwi-gov.ie corona virus
Nawaphi na amanye amaxesha ka-2021 wamkelekile ukuba ubhukishe. Ungasoloko urhoxisa isaziso esifutshane ukuba izithintelo ze-COVID ziyakuthintela ekuhambeni.
Umgangatho ophantsi wendlu unamagumbi okulala ama-3 kunye neendawo zokuhlambela ezi-2 (iindawo zokulala ezi-6). Singanikezela ukuya kuthi ga kwii-airbed ezimbini ezitofotofo zokuphefumla kwiindwendwe ezongezelelweyo (zabantwana). Ukuba uyathandabuza sibuze. Unako kwakhona ukuqesha indlu yonke (zombini amagumbi) ngesaphulelo.
Umgangatho ophantsi ubonelela ngegumbi lokuhlala / lokutyela / lokutyela / ikhitshi kunye nendawo yelanga. I-TV ye-4k ye-LED enazo zonke iitshaneli ze-EIR-com kunye neentlobo ezahlukeneyo zemidlalo / indalo / imbali / iziteshi zokuzonwabisa, umdlali we-blue-ray kunye neeDVD ezahlukeneyo zinika ukuzonwabisa kusapho lonke. Ibroadband yefiber ekhawulezayo kakhulu ikugcina uqhagamshelwe kwindlu yonke.
Zonke iibhedi zinkulu ngokugqithisileyo ezinoomatrasi aba-2 abatsha kunye needuvethi ezi-2 ezilinganayo. Ibafanele abantu abane-allergies. Iifestile ezimenyezwe kathathu ezingenakuvakala zineevens zomoya ezihlengahlengiswayo ezifakiweyo. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngesitovu/i-oveni, imicrowave, iketile, itoaster, umatshini wekofu weNespresso/umatshini wekofu ocoliweyo kunye nezinto ezininzi zetafile / izixhobo zasekhitshini zokupheka nabahlobo kunye nosapho. Sinikezela ngeti yasimahla, i-condiments kunye ne-starter pack yee-capsules zekofu kunye nobisi. Ngaphaya koko, igumbi lethu eliluncedo lixhotyiswe ngoomatshini bokuhlamba, isomisi, intsimbi nokunye. Zonke izixhobo zombane zibhalwe ngemiyalelo ekulula ukuyisebenzisa.
Le ndlu inesitovu seenkuni (iipakethe zokuqala zibandakanyiwe) kunye negumbi lelanga elinemibono emangalisayo yeBurren National Park. I-master suite inegumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela (ishawa/ibhafu yokuhlambela) kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Amanye amagumbi amabini okulala asebenzisa igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese.
Iifama kunye namakhaya okuhlala, umbono omangalisayo weBurren National Park, ulwandle kumgama wokuhamba, ipropathi ibekwe kwindawo ezolileyo ye-du-sac, ekhuselekileyo yabantwana.
I-pub elandelayo emalunga ne-1 km kude, ivenkile elandelayo yegrosari/isikhululo segesi esimalunga neekhilomitha ezi-3, iKinvara Village kunye neendawo zokutyela ezininzi/ii-pubs malunga nomgama we-7 km.
Sinikezela nge-24h yokungena nge-keyless pin pad. Asihlali kwindawo, kodwa umhlobo wethu uhlala kude kwaye unokuza xa kuyimfuneko. Sitsalela umnxeba nje kwaye sinokukunceda kuwo nawuphi na umba.